Vahiny tsy nampoizina tao amin’ny fanangonam-bolan’ny vondrom-piarahamonina Aurora foibe tao Budapest ny polisy · Global Voices teny Malagasy
mahatsapa ho "miverina any amin'ny 1980s ny mpitsidika anay"
Voadika ny 11 Mey 2019 5:40 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, srpski, Shqip, Italiano, English
Polisy hongroà nandritra ny fitsidihana tao amin'ny Auróra, Budapest. Saripikan'i Atlatszo, CC BY-NC-SA 2.5.
Navoaka tamin'ny teny hondroà sy anglisy ity tantara ity ary ny fanaovan-gazety fanadihadiana hongroà tsy mitady tombombarotra, Atlatszo, no namoaka izany. Nivoaka eto ny endrika nasiam-panovana noho ny fifanarahana nifanaovana tamin'ny Global Voices.
Fampitam-baovao sady fikambanana mitady ny mangarahara miorina ao Budapest ny Atlatszo ary manofa birao ao amin'ny Auróra Community Center, tahala iray mampiatrano vondrona sy fikambanana volontera miasa amin'ny vondrom-piarahamonina sy fomba mifototra amin'ny zavakanton'ny fikatrohana. Ny manaraka etoana dia tatitra fohy tamin'ny lanonana notontosaina tao amin'ny Aurora, nokarakarain'ny ekipa mpikambana ao amin'ny Atlatszo.
Nikarakara lanonana azon'ny rehetra idirana izahay ny takarivan'ny 27 Avrily, tao amin'ny Aurora, tao no nanoloranay ny asanay sy namalianay ny fanontaniana avy amin'ny mpamaky izay nanatrika teo. Nampitainay mivantana tao amin'ny Facebook ny lanonana. Taorian'ny fanontaniana sy valiny, nisy ny fijerena miaraka filma fanadihadiana iray, narahin'ny konseritra tao amin'ny toby.
Tonga ny polisy tamin'ny folo ora alina. Namoaka sarin-dry zareo teo ampidirana ny tahala tao amin'ny Instagram ny iray tamin'ny vahininay.
Hatramin'ny nandraisan'ny Praiminisitra Viktor Orbán ny fahefana tamin'ny taona 2010, voampanga ho manimba tsikelikely ny fahafahana demaokratika amin'ny alalan'ny fifehezana ny fampitam-baovao sy ny andrimpanjakana mpitsara ny antoko mpandrendri-bahoaka avy amin'ny elatra havanana Fidesz, ary simbainy tsikelikely ihany koa ny fahafahana akademika.
Nihanifintina nandritra ny governemanta nihatsirefesimandidy tsikelikely teo ambany fahefan'i Orbán ny sehatrasan'ny fikambanam-piraisamonina [mg], fampitam-baovao mahaleotena [mg] ary ivontoerana akademika tahaka ny Aurora.
Ny Aurora dia miorina ao amin'ny distrika faha-8 ao Budapest izay tarihin'ny ben'ny tanàna avy amin'ny antoko mitondra Fidesz. Fehezin'ny Fidesz ihany koa ny filankevitra ao an-toerana.
Efa antaonany ny fiadidiana no niezaka ny hanakatona ny Auróra. Niezaka ny nanakatona azy ry zareo roa taona lasa izay satria nahitana sombina marijuana tany amin'ny sasany amin'ireo vahiny. Niezaka ny nanakatona ny Aurora ry zareo tamin'ny herintaona noho ny fanjavozavoan'ny daty teo amin'ny antonta-taratasy ofisialy anankiroa (ny dosie famoahana sy fananganana ny fikambanana).
Efa nifandray tamin'ny tompon'ny trano mihitsy koa aza ny distrika mba hividy azy, ao anatin'ny ezaka miafina ny hanakatonana ny foiben'ny vondrom-piarahamonina.
Tamin'ny filazana ho fitarainana avy amin'ny mpiara-monina, nobaikon'ny mpiasan'ny distrika ny Aurora bar, antsoina hoe Kioszk, hikatona amin'ny folo ora alina isak'alina. Imbetsaka avy eo ny polisy sy ny mpiasan'ny distrika no nanamarina raha mikatona tokoa ny bar rehefa tonga ny amin'ny folo alina. Nifanamarinana farany moa dia nitranga nandritra ny lanonana fanangonam-bolan'ny Atlatszo tamin'ny asabotsy.
Nanamarika i Zsuzsa Mekler, mpitantana ny Auróra:
Mandefa olona ny fiadidiana hitsirika anay, miaraka amin'izy ireo fotsiny ny polisy. Mitsirika ry zareo raha mikatona ny bar ary dia manoratra tatitra min'izay hitany ao amin'ny trano ry zareo. Efa imbetsaka tokoa ry zareo no nanao izany saingy tsy nahita na inona na inona hahatonga azy ireo hitondra raharaha eny amin'ny fitsarana.
Mitaraina ny sasany amin'ny vahiny fa mahatsapa ho tahaka ny “miverina any amin'ny 1980s ry zareo” raha mampiasa ny polisy ny antoko nanjakazaka hanelingelina ny olona any amin'ny lanonana “jerena ho tsy mendrika”.
Vakio bebe kokoa ny momba ny Aurora sy ireo fanafohana natao azy ao amin'ity tatitry ny CNN ity.